VETV sy Plura Mitambatra ny Tafika Hanampiana Veterana Tsy Nisy Nanana - NAB Show News by Broadcast Beat, Fampisehoana Ofisialy ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » VETV sy Plura hiara-hiasa hanampy ny veterana tsy voasa
VETV sy Plura hiara-hiasa hanampy ny veterana tsy voasa
Ny aterineto an'ny kamiao "Denali Gold" SuperShooter Mobile TV dia nanome fanomezana ho an'ny Veterans-TV an'i NEP.
Robert Lefcovich dia lehilahy iray misionera. Tiany hanampy ireo veteranina tsy an'asa ny mitady asa ao amin'ny indostrian'ny fahitalavitra amin'ny fanomezana azy ireo fiofanana matihanina. Ary noho ny fandraisana anjara manan-danja avy amin'i Ray Kalo sy ny orinasany Plura, dia toa tahaka ny tena zava-misy ny nofin'i Lefcovich.
Tao anatin'ny taona 50 tao amin'ny sehatry ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika, Lefcovich dia nitafy hatsikana maro, anisan'izany ny kisarisary ho mpaka sary (Ny World Sport of ABC, ny Julie Andrews Show, Andao hanao zavatra), editor (Ny fianakaviana rehetra, ny Jeffersons, ny andro iray amin'ny fotoana iray, ny Hallmark Hall of Fame, Insight), Ary vokatry manokana mpanoratra (Sidney Lumet's Power, Woody Allen Ilay Rose purple of Cairo). Tao amin'ny 2019, nanorina i Lefcovich Veterans-TV tany Grass Valley, CA. (Tsy tokony hikorontana amin'ny VET TV, ilay tambajotra ara-tafika matanjaka amin'ny serasera.)
Ny fanambaran'ny misiona ny Veterans-TV (na VETV) dia azo jerena ao amin'ny tranonkala ao amin'ny pejin'ny "Fandaharam-pianarana": "Ny fandaharanay dia manolotra ny fampiofanana ara-teknika tena matihanina indrindra amin'ny aterineto sy ny famokarana Televiziona ary ny famolavolana tetikasa. Ny VETV dia manompo ireo miaramila Veteranin'ny Tafika sy ny Uniformed United States ary ny fianakavian'izy ireo. Ny iraka nomena ny VETV dia ny hanampy hameno ny banga amin'ny fiofanana ho an'ireo miverina avy amin'ny serivisy, ary amin'ny farany amin'ny fanatsarana ny fiainan'ireo Veterans sy ny fianakaviany ... VETV dia tsy fikambanana ara-politika. Manolotra ny fandaharam-pampianaranay ho an'ny mpandray anjara izahay. Ny Veteranina rehetra, ary koa ireo mpivady sy ireo mpiaro ny Veterans ary mpikambana mpikambana mavitrika mihoatra ny 18 taona dia mahazo mandray. Ny VETV dia tsy manavakavaka noho ny firazanana, ny firaisana, ny lahy sy ny vavy, ny foko, ny fivavahana, ny fironana ara-pananahana, na ny toeram-ponenana. "
"Nahazo ny hevitry ny VETV aho taorian'ny fanatsarana ny Overcomers With Hope Studios tany Oakland," hoy i Lefcovich tamiko. "Nihaona tamin'ny toeram-pialan-tsasatra iray aho tao amin'ny 'tobin'i tent' teo ambanin'ny lalamby. Nifanaraka tamin'ny toe-java-misy 'Fangatahana 22' izy ... tsy nanam-bola, tsy afaka nandoa fialofana, tsy nahita asa manan-danja, tsy afaka nandany akanjo ho an'ny tafatafa, sns. Nanana PTSD mora, saingy tsy takatry ny olona ny zavatra ilainy . Nilaza ny zavatra nilainy ny olona iray mba hitondrany azy toy ny maha-olombelona ary hamela azy ny fotoana tokony hampifanarahana. "(Azo henoina ny tantara manontolo Eto.)
"Ny tanjoko dia ny hametraka kamia kely 15-20-tongotra miaraka aminà kamera vitsivitsy ary mandehana any amin'ireny 'tobin'ny lay ireny ary manolotra fiofanana ho an'ny veterana", hoy ihany i Lefcovich. "Izaho dia mandefa mailaka ho an'ireo olona ao amin'ny orinasa, ary tsy ela dia nipoaka ny tarehiko. Te ho anisan'ny tetik'asa ny tsirairay. Ny Group NEP voalohany no nanolotra anay ity kamiao malaza 'Denali Gold' ity. Avy eo ireo orinasa eto an-toerana toy ny Grass Valley, Belden, AJA Video, Ensemble Designs, Telestream, ary ny Renegade Labs no nanome anay ny fitaovana farany sy lehibe indrindra ananan'izy ireo ho fanomezana. Tao amin'ny NAB, nitsidika orinasa 20 aho, ary nanaiky ny hanomezana fitaovana. Blackmagic nanome fanomezana be dia be, anisan'izany ny tenenan'ny 10 19-inch rackmount. Tamin'izay fotoana izay dia tsapako fa tsy nijery ny faritra manan-danja indrindra amin'ny kamiao, ny Production Monitor Wall. Nifandray tamin'ireo orinasa efatra izay manamboatra monitors amin'ny kalitao ilaina amin'ny kamiao aho. Ray Kalo ao Plura dia iray amin'ireo voalohany namaly hoe: 'Lazao anay fotsiny izay ilainao.' "
Kalo dia mandray ny tantara avy eto. "Nihaona tamin'i Bob Lefcovichr avy amin'ny Veterans-TV tao amin'ny NAB 2019 aho. Nifanakalozy hevitra izahay mikasika ny fomba ahafahan'ny Plura sy ny VETV miara-miasa amin'ny fampiasana Plura Monitoring Solutions-manokana ny mpitsidika Plura-miaraka amin'ny tetikasa vaovao. Nanapa-kevitra i Plura mba hanolotra mpitsidika Veterans-TV ho fanohanana ity tetikasa tokana ity. "
"Plura Monitoring Solutions dia ahitana ny monitor monontsivan'ny haino aman-jery maro amin'ny 86-inch, anisan'izany ny 4K-inch, "hoy i Kalo. “Mitovy ihany koa, ny vahaolana Timing / Synchronization dia namboarina ho an'ny fampielezana nomerika sy ny famokarana horonantsary matihanina. Ny vokatra plura dia manome andiany iray tsy manam-paharoa mampiorina, kalitao tsara indrindra ary sarobidy ary azo itokisana. Plura dia fantatra amin'ny endri-javatra lafo sy avo lenta mifototra amin'ny teknolojia fototra. Ny vahaolana ataon'ny orinasa dia misy ny fanaraha-maso amin'ny studio sy portable finday, famokarana famokarana studio, fampisehoana marika fotoana sy ny karatra PCIe-code, fitsapana sy fandrefesana fitaovana ary rindrambaiko ary rafitry ny media digital. "
"Nangataka enina enina 55-inch izahay, izay nanaiky avy hatrany", hoy ihany i Lefcovich. "Toa nifanaraka tamin'io andro io koa ny orinasa iray hafa nanaiky handefa anay enina monja 55-inch. Mila mpanara-maso valo koa izahay momba ny 17-inch ho an'ny fakantsary fakantsary manokana ho an'ny rindrina. Nanontany an'i Ray izahay raha afaka manova ny fangatahantsika amin'ireo mpiambina kely kokoa, ary nanaiky tsy nisy fisalasalana. "
Kalo tsipiriany ny fitaovana ampiasain'i Plura ho an'ny Veterans-TV. "Plura dia nanome ny 8 x 19-inch LCM-119-3G mpandefa horita ho an'ny rindran'ny mpanara-maso ao amin'ny faritra Faritra. Hanara-maso ireo mpijery ireo ny mpijery. Ny fisehoan-javatra amin'ny monitor dia afaka miova mandritra ny fotoana fohy ary mamoaka sary mitovy amin'izany. Ny fanavaozana dia mamerina ny fampisehoana ho an'ny fenitra takila momba ny famirapiratana sy ny loko. Ny fampisehoana lehibe amin'ny gamut dia mety ho feno sata sy tsy misy kalitao, na dia mety tsy marina aza ny fampisehoana ny gamut. Noho izany, ny Plura rehetra dia nanara-maso ny kitapo miaraka amin'ny Plura ICAC [Fitaovana fampifandraisan-kina ho an'ny alimina sy fanoratana] ary ny loko fangatahana. Ny monitors rehetra dia navoaka tamin'ny tatitra fanamarinana. "
Nanontany an'i Lefcovich aho mba hilaza amiko hoe iza no hitondra ny kilasy Veterans-TV. "Ny mpampianatra anay dia sady mpirotsaka an-tsitrapo no manampahaizana manokana na misotro ronono any amin'ny faritra misy azy ireo. Anisan'izany i Bob Ennis, talen'ny Wheel of Fortune; Peter Mason, ny CTO ary ny EIC amin'ny Veterans-TV; sy Jim Boston, EIC amin'ny kamiao maro ary mpanoratra ny boky farany amin'ny fahitalavitra finday TV on Wheels. Kevin Worthrem sy Glen Stillwell dia hampianatra feo. John Field, Bob Ennis, ary Mike Minkoff dia hampianatra amin'ny fahaiza-mitantana ara-teknika. Izaho dia hampiofana amin'ny eClips sy Adobe Premiere editors, ary i Joe Lewis dia hampianatra antsika mazoto ary ny kilasin'ny ProTools. Maro koa no nanolotra ny tolotr'izy ireo, saingy miandry ny fandaharam-pianaranay ao amin'ny kilasy mba hanokanan'izy ireo ny fotoanany.
"Mbola tsy nanomboka ny fotoam-pianarana isika, satria tsy hanana fahefana amin'ny kamiao isika raha tsy amin'ity volana ity. Ny orinasan-tsolika PG & E dia nitaky fiarovana amin'ny bankirompitra, ary mbola mampakatra ny $ 18,000 ilaina amin'ny fifandraisana vaovao. Hitantsika ny VETV manomboka amin'ny kilasy 10 mpianatra iray, amin'ny kilasy telo samihafa amin'ny mpianatra 8-10 tsirairay. Mikatsaka fatratra ny RV / Toy Hauler izahay amin'ny fananganana sehatry ny finday 4 ho an'ireo mpianatra hampiasaina amin'ny fampiofanana "tena fiainana" manao asa any amin'ny faritra avaratr'i Californie ary handoa izany. Raha mahita tale CEO ho an'ny org isika dia afaka mahita kamiao hafa indray andro any ao San Diego, Jacksonville FL, ary New York. "
Nofintiniko ny resadresaka nifanaovako tamin'i Kalo raha toa ka nihevitra an'i Plura hiara-miasa amin'ny Veterans-TV amin'ny ho avy izy. "Tsy misy," hoy izy. "Tianay any Plura ny fanompoana ataonay, ary ny sorona tsy misy dikany sy tsy misy fitiavan-tena nataony ho an'ny firenentsika. Plura dia mankasitraka tanteraka ny asa fanompoana ataon'izy ireo manerana izao tontolo izao, ary ny ampahany amin'io fandaharam-pianarana io dia tsy misy afa-tsy mariky ny fanajana. "
AHA Video Belden fampitana injeniera fampitana Engineering Denali Gold SuperShooter Mobile TV kamera Ensemble Designs Grass Valley Kat 2019 NEP Group Overcomers amin'ny Studios Plura Monitoring Solutions Ray Kalo Renegade Labs Robert Lefcovich Telestream TV Technology Ultra HD Forum Veterans-TV VETV Video injeniera	2019-07-03
Previous: Deluxe Toronto Senior Colorist Bill Ferwerda dia Manampy Mibanjina An'izao Tontolo Izao Ankoatra ny Sekolin'i Gileada noho ny "Ny tantaran'ny tànan-dehilahy" Three
Next: Ny fitomboan'ny fangatahana ho an'ny teknolojian'ny famokarana media virtoaly Aperi dia manampy amin'ny fiarovana ny $ 10m + amin'ny famatsiam-bola